Gatiin dhiiga Amaaraa meeqa? Oduu Simbirtuu Bahir Dar irraa!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGatiin dhiiga Amaaraa meeqa? Oduu Simbirtuu Bahir Dar irraa!!
Gatiin dhiiga Amaaraa meeqa
Oduu Simbirtuu Bahir Dar irraa
Guyyaa har’aa sa’aatii booda dhimma daangaa Tigraay keessa seenuu fi baasuu humna addaa naannoo Amaaaraa ilaalchisee walgahiin Bahir Daritti #Crime Minister, gooftota Cundhuuraa,Abiy Ahmed,Preseident Amaaraa,Aganyaaw Tashaagarii, komishineera poolisii naannoo Amaaraa, Abbaree Addaamuu fi hooggantoota RIB Iizii Kaaba Lixaa hammate gaggeeffame. Ajandaa guddaan humni addaa hunduu federaala jala waan galuuf kan naannoo Tigraay keessaa suuta suutaan haa akka bahuu fi naannooleen Daanshaa, Humaraa, Raayyaa, Allaaxaa bulchinsa Tigraay jalatti akka deebaniif ture.
Walgahii kana irratti Abbaree Addaamuu Abiyyiidhaan “gaaffii naaf deebistaa?” Jedheen. Abiy Ahmedis “eyyeen” jedheen. Abbaree Addaamuu,Komishinerri poolisii naannoo Amaaraa “Mee gatiin dhiiga Amaaraa si biratti meeqa? Lafa Tigiraay osoo hin taane lafa keenya dhiiga keenyaan deebifanne; Matakkal, Wallagga, Gurra fardaa keessatti Amaaraatu ajjeefama. Kana naaf deebisi!; Kanaan ala salphina yoo barbaaddeen ala dhimma lafa keenyaa lammaffaa hin kaasiin; Tigiraay kan kooti jedha taanaan ragaa haa fidan!” jedheen. Bifa kanaan muummeen ministeera Cundhuuraa warra soddaa birattis salphatee galeera.
Manneen kondominiyeii 40/60 namoota abbootii carraaf dabarfamuu turan 21,552 keessaa 8552 duwwaan abbootii carraaf dabarfamuuf akka carraan bu’e barameera. Kan hafe kumni 13 miseensota waraanaa fi basaastota shaabiyaa/Eertiraaf/ akka beenyaatti kennamuuf jira. Muraasni miseensota RIB qaama hir’ataniif qoodama.